Ukufihla ukuNgabhalisi kwakho ayisiSicwangciso sokuGcina | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 26, 2012 NgeCawa, Agasti 26, 2012 Douglas Karr
Sivavanya iinkonzo ezininzi ukuze sikwazi ukubhala ngazo kwibhlog okanye sizisebenzisele abathengi bethu. Enye indlela esiqala ukuyibona ngakumbi nangakumbi ziinkonzo ezikuvumela ukuba uqalise iakhawunti ngokulula, kodwa abanazo naziphi na iindlela zokurhoxisa. Andiqondi ukuba oku kokongamela… kwaye ikhawuleza indishenxisele kwinkampani.
Ndichithe malunga nemizuzu eli-15 ngale ntsasa ndisenza kanye loo nto. Inkonzo yokujonga imidiya yoluntu ibonelela Uzamo lasimahla ndiye ndatyikitya. Emva kweeveki ezi-2, ndaqala ukufumana ii-imeyile ezazindilumkisa ukuba ityala lam sele liphelile. Emva kweentsuku ezingama-30, ndaqala ukufumana ii-imeyile zemihla ngemihla ezazindixelela ukuba ixesha lam liphelile kwaye ndinekhonkco apho ndinokuphucula khona ukuya kwiakhawunti ehlawulelweyo.
Imeyile ungabhalisi ikhonkco undizisile kwiphepha lokungena kwiakhawunti. Grrr… kufuneka ungene ukuze uzikhuphe kubhaliso yenye yezona zilwanyana zasekhaya zam. Kuba bendingena ngemvume kunjalo, ndiye ndacinga ukuba ndiza kuyicima iakhawunti. Ndiye kwiphepha lokukhetha iakhawunti kwaye ekuphela kwezikhetho bezinokukhethwa okwahlukileyo okuphuculweyo- akukho rhoxiso ukhetho. Nokuba kushicilelwe kakuhle.
Ewe, kwakungekho ndlela yokucela inkxaso. I-FAQ nje. Ukuphononongwa ngokukhawuleza kwee-FAQs kwaye akukho lwazi malunga nokucima iakhawunti. Ngombulelo, ukukhangela kwangaphakathi kwee-FAQ kubonelela ngesisombululo. Ikhonkco lokucima elingcwatywe kwithebhu engaziwayo ngaphakathi kwiprofayile yomsebenzisi.
Oku kundikhumbuza umzi mveliso wephephandaba… apho ungasayina khona kwi-Intanethi, kodwa kuya kufuneka ubize kwaye ulinde ukubamba ukuze uthethe nommeli weenkonzo zabathengi ukuze urhoxise umrhumo wakho. Kwaye… endaweni yokurhoxisa, bazama ukukunika ezinye iindlela zokubhalisela kunye nezipho. Ndiye ndatsalela umnxeba naba bantu apho bendikhathazeke khona kangangokuba ndiphindaphinde "ukucima iakhawunti yam" amaxesha ngamaxesha de bavumelana.
Bantu, ukuba le yeyenu Isicwangciso sokugcina, Unomsebenzi ekufuneka uwenzile. Kwaye, uyazifihla iingxaki kwimveliso okanye ngenkonzo ngokufihla ukugcinwa kwabathengi bakho okwenyani. Yiyeke! Ukurhoxisa imveliso okanye inkonzo kufuneka kube nje ngokulula njengoko ubhalisela enye.
UScott Wyden Kivowitz
Aug 27, 2012 ngo-7:26 PM
Iyandikhathaza kakhulu xa ndiyibona loo nto. Nje ukuba ndifumane i-imeyile enekhonkco elibi lokungabhalisi ndiyiphawula njengogaxekile kwaye ukuba oko akuncedi, yenza umthetho wokuba uwacime kwangoko.